नेपालको भारोत्तोलन विश्वमा कुन स्तरमा छ ? - संवाद - नेपाल
नेपालको भारोत्तोलन विश्वमा कुन स्तरमा छ ?
‘नेपाली भारोत्तोलन एसियाली स्तरमा’
नेपालले भारोत्तोलन खेलको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा एसियाली युथ तथा जुनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै छ । ९ देखि १४ साउनसम्म नेपाल भारोत्तोलन संघले ललितपुरमा आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा ३२ राष्ट्रका तीन सयभन्दा बढी खेलाडी मैदानमा छन् । भारोत्तोलनमा जम्मा ४० जना मात्रै खेलाडी छन्, जुन साह्रै सानो संख्या हो । यो प्रतियोगिताले नयाँ खेलाडी जन्माउन प्रेरित गर्न सक्ने भएकाले यसलाई महफ्वपूर्ण प्रतियोगिताका रुपमा हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष रतनकुमार टन्डनसँग गरिएको कुराकानी :
यो प्रतियोगिताले नेपालको भारोत्तोलन खेलमा कस्तो प्रभाव देखिने छ ?
कुनै पनि प्रतियोगिताले खेलाडीलाई ‘ग्रो’ गराउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । त्यही भएर हामीले यो प्रतियोगिताबाट युवा पुस्तालाई भारोत्तोलनप्रति आकर्षित गराउने अपेक्षा लिएका छौँ । स्वाभाविक हो, यसले नयाँ खेलाडी जन्माउँछ ।
नयाँ खेलाडी आउन नसक्नुको खास कारणचाहिँ के हो ?
खेलकुदमा स्रोत–साधनको अभाव प्राय: सबै खेलको साझा समस्या हो । हामीसँग पनि स्रोत–साधन पर्याप्त थिएन । भौतिक पूर्वाधार थिएन । अहिले यस्तो अवस्थामा सुधार हुँदै गए पनि
अपुग नै छ ।
ठूला प्रतियोगिता नियमित हुन नसक्नुको कारण ?
सन् २०१२ यता भारोत्तोलनका ठूला प्रतियोगिता भएकै छैन । सन् २०१५ मा एसियन च्याम्पियनसिप नेपालले आयोजना गर्ने तय भएको थियो । तर, भूकम्पले गर्दा सम्भव भएन । मुख्यत: यिनै कारणले नयाँ खेलाडी आउने बाटो थुनिएको हो ।
भारोत्तोलन खेलेर मात्र जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था छ ?
भविष्य अनिश्चित भएर पो नयाँ खेलाडी आउन नसकेका रहेछन् त, होइन ?
भारोत्तोलनमा भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । यो पाटो निराशाजनक छ । संसारका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै हो, धेरथोर ।
भारोत्तोलन खेलाडीका लागि सुविधाचाहिँ के के छन् ?
त्यस्तो विशेष केही छैन । राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सकेमा विदेश जाने अवसर मिल्छ । भत्ता पाइन्छ, त्यत्ति हो ।
भनेपछि सोखले मात्रै धानिरहेको छ ?
यस्तो अवस्थालाई चिर्न के गर्नुपर्छ ?
मुख्य कुरा ‘एक्सपोजर’ नै हो । यसका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहका प्रतियोगिता भइरहनुपर्छ । अनि मात्रै, बिस्तारै बजार बन्दै जान्छ ।
सहभागी त वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा समेत भएका छौँ । समग्रमा हेर्दा अहिले हामी एसियाली स्तरमा उक्लेका छौँ । भारोत्तोलनमा हाम्रो दर्दनाक विगत हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसक्यौँ ।
कस्तो दर्दनाक अवस्था ?
सन् २०१२ मा मैले नेपालगन्जमा आफ्नै खर्चमा दक्षिण एसियाली खेल खेलाएँ । त्यतिखेर स्तरीय खेलाडी पाउनै मुस्किल थियो । बल्लतल्ल उक्त प्रतियोगिताबाट तीन/चार जना नयाँ खेलाडी जन्मिए । अहिले यो खेलप्रति आकर्षण बढिरहेको छ ।
यो खेल सफलतापूर्वक सम्पन्न भए नेपालका लागि वल्र्ड च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने बाटो खुल्ने बताउनुभएको थियो । नेपालले यस्तो प्रतियोगिता कति समयमा आयोजना गर्ला ?
तुरुन्तै गर्न सकिँदैन । किनभने, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिकाको पनि भूमिका हुन्छ । सन् २०१८ सम्म सक्दैनौँ । त्यसपछि जहिल्यै तयार छौँ । हामीसँग एक हदसम्म पूर्वाधारसमेत छ ।